pointer *လေးဘဲကျန်*တော့တဲ့ virus — MYSTERY ZILLION
pointer *လေးဘဲကျန်*တော့တဲ့ virus
March 2009 edited November 2009 in Antivirus & Virus
ကျနော ကြုံနေတာက computer ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့Windows Loading တော့တက်လာတယ်ပြီးတော့
Username and Password ထည့်မဲ့နေရာ(login အခန်း)ပေါ ်မလာဘဲ black Screen မှာ Mouse pointer တစ်ခုဘဲ ပေါ ်တယ် ကျန်တာဘာ message မှလည်း မပြဘူး ဘာမှလည်း လုပ်မရဘူး
အဲဒါနဲ ့ဘဲ ERD နဲ ့ဘဲ system restore ပြန်ခေါ ်နေရတယ်
တစ်လုံးတည်းမဟုတ်ဘူးး တစ်လုံးပြီးတစ်လုံးဖြစ်လာတာ လေးငါးခြောက်လုပ်လောက်ဖြစ်လာတယ်
အချိ ုအလုံးဆိုရင် Kaspersky Anti Virus7နဲ ့Update လုပ်ပြီး စစ်တာကို ခဏနေ အဲဒီစက်တွေပါ လိုက်ဖြစ်တယ်
အဲဒါဘာဖိုင်တွေကို ဘာကောင်တွေကိုက်လို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရင် အဆင်ပြေမလဲသိချင်လိို ့ပါ
System Restore လုပ်ရင်အဆင်ပြေသွားပေးမဲ့ အဲဒီလို လုပ်ရတာထက် ဖြစ်ပေါ ်လာတဲ့ အခက်အခဲကို တိုက်ရိုက်ဖြေရှင်းနိုင်ချင်လို ့အကူအညီတောင်းလိုက်တာပါခင်ဗျာ
၀င်းဒိုးကို Repair လုပ်ကြည့်ပါလား.....။ ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားမယ်တင်တယ်။
System Restore ka..ma use thin ta' program par..
Virus win nay ta' HDD ko Virus Defination update laot htar ta' PC mhar
tat par..( Remark : HDD partition ko win ma kyi par na'.) Antivirus ma naing yin..Pyar toat kone mal..:O virus check pot..
Safe mode ka nay tat p..Virus check par..
Antivirus so yin tot..
1. nod 32 business edition ( over 15000 days )
like par tal..
hehe..lone wa ma ok yin tot...window..Reparing...pae loat ya mhar par..:5:
Kyone lo sayar win loat tar...
burglish မသုံးပါနဲ့။zawgyi Font မရှိရင် http://www.zawgyi.net/ မှာ download ချပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။လုံး၀အခက်အခဲ ဖြစ်နေရင်တော့ Burglish Test Engine ကိုသုံးကြည့်ပါ။ MZ စည်းကမ်းချက် တွေကို ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
explorer.exe ကို ကိုက်သွားတာပါ..
တခြားစက်က explorer ကို system32 အောက်မှာသွားယူပြီး..ထည့်ပေးလိုက်ရင်ရနိုင်ပါတယ်.
window ပြန်တင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ။ အဲဒီကောင်၀င်ပြီးရင် ပြန်ကောင်းလည်းခဏပါ။